एकिकृत समाजवादीकाे जन्तरखानीमा वडा कमिटी, भ्रष्टाचार विरुद्ध दवाव अभियान चलाउने - Nagarik Medi
२०७८ माघ २, आईतबार | Sun, 16, Jan, 2022
एकिकृत समाजवादीकाे जन्तरखानीमा वडा कमिटी, भ्रष्टाचार विरुद्ध दवाव अभियान चलाउने
२०७८ पौष ९, शुक्रबार मा प्रकाशित ३ हफ्ता अघि
ओखलढुंगा- नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ले जन्तरखानीमा वडा कमिटी घाेषणा गरेकाे छ । सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेकाे जन्तरखानीमा पारस मगरकाे अध्यक्षतामा वडा कमिटी गठन भएकाे हाे । कमिटीकाे उपाध्यक्षमा डेक बहादुर मगर, सचिव किशाेर मगर रहेकाे ३१ सदस्यीय कमिटी निर्माण गरेकाे हाे ।
त्यस्तै युवा संघ नेपालकाे वडा कमीटि समेत चयन भएकाे छ । मिलन मगरकाे अध्यक्षतामा मन कुमार विक उपाध्यक्ष र सन्ताेष मगर सचिव रहेकाे ३५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेकाे नेकपा एकिकृत समाजवादीका उप सचिव दिपक फुयलले बताए ।
कमिटीकाे घाेषणा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष हंशराज वाग्ले र सपथ ग्रहण जिल्ला ईञ्चार्ज नेत्र भट्राईले गराए । कार्यक्रममा एकिकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य निर्मला श्रेष्ठ जिल्ला उपाध्यक्ष मेख बहादुर खड्का र उप सचिव शारदा निराैला लगायत नेताहरु उपस्थित थिए । यस्तै एकिकृत समाजवादीले जिल्ला व्यापी रुपमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउने भएकाे छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र ढिलासुस्तीबारे भण्डाफाेर अभियान चलाउने जिल्ला अध्यक्ष हश‌ंराज वाग्लेले बताए । उनले जन्तरखानीबाट साे अभियान घाेषणा गरे ।
रेडक्रस अधिवेशन: चिशंखुगढीमा निशान्त शर्मा, ओखलढुंगा उपशाखामा साेचन शाक्य सभापति
भारी मतान्तरमा एमाले अध्यक्षमा शंकर कट्वाल विजयी
एमाले अधिवेशन: सिताराम र शंकर चुनावी मैदानमा, काे नेता कस्काे पक्षमा ?
कार्यकर्ताकाे ध्यान माेड्न एमालेकाे बन्द शत्रमा एकिकृत समाजवादीका नेता नेत्र भट्टराईकाे ‘सत्ताे-सराप’ !
एमाले पदाधिकारी मत परिणाम: कस्काे कति मत ?
एमालेका काे उम्मेदवार कस्ता, कस्ले मार्ला बाजी ?
यसरी शुरु भयो एमाले ओखलढुंगाको जिल्ला अधिवेशन (हेर्नुहाेस भिडियो)
एमाले अधिवेशनकाे उद्घाटन पुस २३ मा, कसरी हाेला नेतृत्व चयन ?